Germany, Germany Au Pair Germany - GERMAN
1 2 Enda pasi
" Reply #11: February 23, 2020, 10: 20: 47 AM »
Ndinoreva, basa razvino revaranda, ndaive neshamwari mugwaro reGerman, uye akauya nenzira imwe chete. Semuenzaniso, ini ndanga ndichishanda pafekitori. Takanga tiri vanhu 7 kunze kwemurume achirovedza. Us. Mutengo weawa pamunhu mumwe nemumwe waive uchitora 34 euro kuma13 euros. Akataura kuti kana isu taida kuchera mashoma, etc. Vanhu vekuEurope sekunge vatorwa nekuti vanoshanda zvakachipa uye vanowana mari zhinji kubva kuvakuru. Current İNTURKEY reSiriya Vashandirwi vari mumamiriro ezvinhu akafanana chaizvo chikonzero ukaroorana mwenga anoda inzwi pabepa wemasaini wasvika Europe regai kuteerera inishuwarenzi uye cheaply çalıştiriyorlar..boyl chinhu. A shoma zano kubva kwandiri mupfungwa yezvandakazoita mumashure ...
" Reply #12: February 26, 2020, 11: 15: 49 AM »
Yakatorwa mu: KLpSiz - Kukadzi 23, 2020, 10: 20: 47 AM
Ini handibvumirani newe. Ini ndinofunga hatifanirwe kuroora kuti tidzidze mutauro. )) Dambudziko revari kuda kuva Au Pair hakusi kugara muGerman uye vadzidze mitauro. Saka, sekutaura kwako, harusi rudo rweEurope. Nehurombo, isu hatina mari yemari yekuenda kuchikoro chemutauro. Yakawanda sei imba yekutandarira kuGermany? Ndakatsvaga muchikoro chemutauro. 200 maEuro pasvondo .. Kana tikawedzera chikafu uye chinwiwa, zvinopfuura 250 Euro. Saka 1000 Euro pamwedzi. Mune mamwe mazwi, kana tikawedzera mari muhomwe yatinowana kubva kumhuri nekugadzira auya, zvinopfuura ma1350 Euro. Ini ndinofunga iri nhamba inonzwisisika kwemaawa makumi matatu ebasa. Kufunga mari yakagamuchirwa kuTurkey. Chimwe chinhu chakadai sechiwana 30 - 30 TL yemushandi wemwana-maawa makumi matatu ) Ndakaita account kuti ndikwanise kuenda kuchikoro chemutauro kwemwedzi gumi nemaviri, pekugara gore rega rega + mari yekugara inowedzera 12 Euro kune ino uye mwedzi gumi nemaviri chikoro chemutauro unowedzera 12.000 Euro. 12 TL )) Saka zvirokwazvo kune simba rakakwana reizvi. Asi kune avo vasina kukwana, Au paraness inogona kuva muponesi kwandiri. Ini ndinofunga kuti ibasa kuitirwa kwenguva pfupi, ndinofunga. Zvakaomawo zvikuru kuwana vhiza yevadzidzi. Izvo zvinodikanwa kunyora kuti iwe unogona kusangana nehuwandu hwakakwira. Vadzidzi havabvumidzwe kushanda. Saka vhiza rechikoro remutauro rinongoitirwa vapfumi ((Ndakanzwa kuti zviri nyore kwazvo kuwana vhiza yeAu Pair. Hazvina kudikanwa kutaura chero pfuma yezvemari. Zvinokwanisika kudzidzira nemhuri. Izvo zvakafanana mapatani muzvikoro zvemitauro. Zvakare, zvinogara zviri muchiTurkey mukirasi. Wakatenderwa nazvo here? " Kuvandudza yako Turkish uye kushandisa 130.000 TL. Ehe, iyi ndiyo pfungwa yangu. Handina imwe sarudzo, kunze kweAri pair.
" Reply #13: February 26, 2020, 08: 05: 39 AM »
Kunyangwe ane runako rwakadii, iwe uri halal, hapana akasiyana neuranda, ndakaona iye mupenyu mupenyu. Yakachena imba, tarisa vana, nezvimwe uye ivo vakabva vauya kuzodzidza mutauro wavakabva Vazhinji veavo vanouya vanosara neimwe nzira chete mutauro. Gumi vanouya kuzodzidza gumi pagumi. Anyway, never mind, hapana chikonzero chekupokana, murandakadzi anogona kuunza babysitters zvakachipa, maGerman haana dambudziko 😊
" Reply #14: February 27, 2020, 03: 02: 59 AM »
Quote: Kukadzi - 26, 2020, 08: 05: 39 AM
Ipapo ini ndinopinda iyo 10% yawakataura. )) Hatisi kukurukura zvakadaro. Isu tinongonyora mazano edu. Dzimwe shamwari dzinoverenga forum inoverenga zvirevo zvevanhu vane maonero akasiyana. Vazhinji veavo vanouya vanosara, hongu, vanovimba nevanhu vanouya. Kana iwe usiri kuda basa iri basa zvakanaka mabasa nhanhatu ipapo Kouchak chakuvhuvhu manera ivo kuvavarira pamutemo muna Turkey. Ivo vanodzidza mutauro wavo uye vanodzoka kana vaine basa rakanaka rekudzidza. Ipapo, zvechokwadi, nemikana iri nani zvikuru, vanogona kuwana basa kune imwe nyika uye kuwana mvumo yebasa kubva pamutemo nzira. Au Pairlik harisi chirongwa chitsva. Izvo zvakaitwa kwamakore makumi mana nemakumi mashanu. Sezvamataura, kana zvakaita seuranda, zvechokwadi hwaizovharwa kune imwe nzvimbo. Hapana munhu angade kufora kana. Uyewo, kana iwe uchiongorora kuuya kubva Turkey uye Denmark chete upfumi pamwero hahusvikirwi; Vasikana vanobva kunyika dzakaita seFinland, Sweden, Norway vanotora chikamu muchirongwa ichi. Mune mamwe mazwi, kana aive akaipa kwazvo, hapana munhu anobva kune yakakwira mari nyika angadai akatora chikamu muchirongwa ichi. Asi pane imwe nguva iwe unogona kunge uine chokwadi. Dzimwe mhuri dzinotadzira dzinotambudza vaviri vaviri uye dzichishandisa ivo sevasikana. Mune ino kesi, kana iwe ukaenda neakanaka agency, agency yako inochengetedza kodzero dzako uye inoshandura mhuri yako. Asi kana iwe ukaenda kumhuri yawakaona pawebhu uye iyo mhuri isina kusaina chibvumirano neanobvumirana, vanogona kukubata sezvavanoda. Kodzero dzese dzeAna Pairs dzinovimbiswa nezvibvumirano. Mhuri dzisina kutevedzera dzinotumirwa kunze kuchirongwa. Ehe, sezvandataura, kana mhuri yakatenga imwe auya kuburikidza neiyo agency chiteshi. Ini ndinopesana nehurongwa hwekutarisa chirongwa chakananga cheavo vane matambudziko. Inofanira kukurukurwa nezvakanaka nezvakakora. Kwaizenge kwakarara pamusoro wake, kwete kurara. Mukuwedzera, hapana mutemo wekuti munhu wese anogona auye vaviri. Hazvigone kutaurwa kana iri riri nyore basa. Ndinofunga haudi maGerman zvikuru :)) Iwe wanyora maid pane zvakachipa. Asi pano ini handisi kuzobatana newe zvakare. kwete maGerman chete. The Britain; MaAmericans, maFrenchmen, maDutchmen, kunyangwe maChinese (kwete panguva ino, chokwadi, hahahahah) tenga Au jo. Chirongwa chepasirese.
" Reply #15: March 10, 2020, 03: 25: 12 AM »
Vabvunze vanenge vachikarira kutora chikamu muAu Pair Germany Chirongwa vanogona kunyorera kuGoethe Institute bvunzo yavo yeA1. Parizvino vari kupa mazuva ebvunzo kuIstanbul pakutanga kwaMay. Zvichabatsira kuita zvirongwa zvako zvinoenderana nezuva rino. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chirongwa ichi, iwe unogona kutibata nesu saTia Au Pair Germany.
" Reply #16: March 19, 2020, 12: 28: 34 AM »
Isu tiri kusangana nemazuva anoshamisa nekuda kweCorona virus. Chekutanga pane zvese, tinoshuvira kuti mazuva ano apere nekukurumidza sezvazvinogona. Tinotarisira kuwedzera kukuru kwezveAu Pair zvinodiwa mushure mekunge mazuva akaipa apfuura. Kurumidza kutora mukana wekuwedzera uyu uye shandura dambudziko racho kuve mukana. Iwe unogona kusvika isu paInternet saTia Au Pair Germany. Zvako zvapachokwadi; Timoti Au Pair
1 2 Enda kumusoro